कर्णालीका बालबालिका अभिभावसँगै भारततिर » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कर्णालीका बालबालिका अभिभावसँगै भारततिर
मंगलवार, माघ १८, २०७३ ०५:०९ मा प्रकाशित !
गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णाली अञ्चलका युवाहरु दिनप्रति दिन भारत जाने संख्या बढदै गएको छ । कर्णालीको धेरै ठाउँमा उब्जनीयोग्य जमिन कम र त्यसमा पनि वर्षेको एकमात्र बाली फल्ने गर्छ । स्थानीय उत्पदनले बजार नपाएको र कृषिमा आधुनिकरण नहुँदा दैनिक जीवन गुजराको लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
कर्णालीका अधिकांश पुरुषहरु खेतीपाती लगाएर ६ महिनाको लागि भारत जाने गर्छन् र खेती लगाउने समयमा फिर्ता हुने हुँदा गाउँमा पुरुषको संख्य एकदम कम हुन्छ । नेपालमा जति पनि परिवर्तन आएपनि जीवन गुजराको लागि भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट कर्णाली मुक्त हुन सकेको छैन । सुर्खेत बसपार्कबाट नेपालगञ्ज हुँदै दैनिक ठूलो संख्यामा युवा र बुढापाकाहरु भारत गइरहेका छन् । घरमा बाच्चाका हेरचाह गर्ने कोही नभएका कारण केहीले बाच्चा बोकेरै भारत गइरहेका छन् ।
यस्तै मध्येका एक हुन् कालिकोट जुविथाका तिते परियार । उनी ५० वर्षका भए । पाँच जनाको परिवार पाल्नु पर्ने तितेकै जिम्मामा छ । उनले पहिलो श्रीमतिबाट बच्चा नभएपछि अर्को विवाह गरेका हुन् । छोराको आसले तितेले दोस्रो विहे गरे तर कान्छिबाट पनि छोरीमात्र भएपछि उनी निरास भएका छन् ।
‘छोराका आसले कान्छि ल्याएँ, अब त श्रीमतिको कोख सुकिसकेको छ, श्रीमति र छोरी पाल्न भारत जार्नुपर्ने हुन्छ’ तितेले भने । उनले विगत १९ वर्षदेखि भारतमा ज्याला मजदुरी गरि परिवार पाल्ने गरेका छन् । तितले पहिला सिलाई कटाईबाट परिवारको खर्च चलाउँदै थिए । गाउँमा आधानिक कपडाको प्रवेशसँगै उनलाई जीवन गुजरा गारो भएपछि विदेशीन बाध्य भए ।
भारतमा ज्यालादारी गरेर मासिक ७ देखि ८ हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको सुर्खेत बसपार्कमा भेटिएका तितेले अनलाइन डबलीसँग बताए । उनले पाँच महिनापछि आफू घर फर्किने बताए । उनले भतिजाको छोरा पनि सँगै लगेका छन् । घरमा हेरचाह गर्ने कोही नभएका कारण आफूले सँगै लग्नु परेको तितेले बताए । उनीजस्तै धेरैले बालबच्चासँगै बोकेर भारत जाने गर्छन् ।
कालिकोट भर्ता–२ का राजेन्द शाही पनि मजदूरीका लागि भारततिर हिडेका छन् । आर्थिक अभावकै कारण कक्षा ५ मा अध्ययन गर्दागर्दै स्कूल छोड्न बाध्य भए । बुबा भारतमै बस्ने गरेपछि घर खर्च चलाउन समस्या भएपछि मजदुरी गर्न भारत जान बाध्य भएको राजेन्द्रले बताए । घर खर्च चलाउन ६ महिना भारत ६ महिना घर गर्नु परिरहेको उनले बताए ।
आर्थिक अभावकै कारण कक्षा १० को पढाई छोडेर भारत जान सुरु गरे केशव परिवारले । ६ घर परिवार उनकै जिम्मामा छ । उनी भारतको एनएम कम्पनीमा सधैं चैत महिनाबाट इन्ट्री हुन्छ । उनले महिनामा १८ हजारसम्म कमाई हुने गरेको केशले सुनाए । कालिकोट भर्ता–२ कै टंक परियारको १२ जनाको घर परिवार छ । उनले घर परिवारको खर्च भारतबाटै चलाउनु पर्छ । उनको मुख्य आय भनेकै ६ महिना भारतको कमाई हो ।
भाई सन्तोषलाई पनि सँगै लिएर टंकले भारत जाँदै छन् । ‘के गर्नु ठुलो परिवार छ । गाउँमा केही काम पाइदैन । घर परिवार पाल्न भारत जानुको अर्को विकल्प छैन’ टंकले भने । आफू सानै उमेरदेखि भारत जान सुरु गरेको र ७ महिना बसेर घर फर्किने टंकले सुनाए ।
PREVIOUS POST Previous post: लेखा समितिको सभापतिमा डोरप्र्रसाद
NEXT POST Next post: लेखापाल कटुवाल ४० हजार घुस लिँदालिँदै अख्तियारकाे फन्दामा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, माघ १८, २०७३ ०५:०९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, माघ १८, २०७३ ०५:०९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, माघ १८, २०७३ ०५:०९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, माघ १८, २०७३ ०५:०९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, माघ १८, २०७३ ०५:०९